Maxkamadda Sare ee Delhi: Maamulayaasha WhatsApp maaha Mas'uuliyad
Maxkamadda Sare ee Delhi: Maamulayaasha WhatsApp maaha Mas'uuliyad Mawduuca
Maxkamadda sare ee Delhi ayaa go'aan ka gaartay go'aanka sheegaya in kormeerayaasha WhatsApp iyo qof kale oo ka mid ah maamulayaasha isgaarsiinta aan loo qaadan karin mas'uul ka ah gardarrada, marka laga reebo shakhsiyaadka ku jira dib u dhoofinta ama farriimaha aan haboonayn.
Waa maxay sababta loo yaqaan 'WhatsApp Group' ma aha mid mas'uulka ka ah mawduuca?
Maxkamadda Sare ee Delhi ayaa horey u sii waday in ay sheegto in "Ma ahan inkasta oo aysan jirin maamulaha midabtakoorka mid kasta oo ka mid ah ogeysiisyada oo aan la soo dhajin karin shakhsiyaadka ka imaanaya kulanka".
Xaaladda marka la eego Qodobka Maxkamada Xogta Caymiska ayaa waxaa diiwaangeliyey Ashish Bahlla, oo xiriir la lahaa shirkad dhuleed ah. Waxa uu qeexay doodda looga soo horjeedo Vishal Dubey, taas oo sida muuqata ahayd madaxa fulinta hadalka. Tani waxay ka dhacdey xaqiiqda ah, iibsadayaasha kala duwan ee shirkad gaar ah oo hijradeed oo loogu talagalay Haryana ayaa sii waday inay soo diraan fariimo ku saabsan wadahadalka kulanka, maadaama aysan helin lahaansho waqtigoodii oo ay sii socdeen si ay u noqdaan dib u dhac. Waxaa jiray fariin fara badan oo lagu hagayey Ashish Bhalla, oo markaa maxkamad u gudbisay maxkamadeynta dadka shakhsiyaadka ka soo horjeeda si ay u cambaareeyaan sawirkiisa iyo been abuurkiisa, hase yeeshee markii uusan mar dambe soo saarin qeyb ka mid ah hoyga hoyga.
Dacwadda ay qoreen Ashish Bahlla waxay codsatay dardaaran joogto ah oo ka dhan ah mid kasta oo ka mid ah shakhsiyaadka ku jira wada hadalka kulanka isaga oo ka soo horjeeda isaga iyo sidoo kale dhibaatooyinka maaliyadeed ee loo xilsaaray.
Equity Rajiv Sahai Endlaw, oo ah kursiga kaliya ee garsoorka ah, ayaa diiday in kiiskii ladilay ee ahaa kormeeraha masuulka ka ah oo uu horay u sii socdo, "Anigu ma fahmi karo sida maamulaha kuleejka loo qaban karo mowqifka nukliyeerka, iyadoon loo eegin suurtagal ah in wax kasta, oo ay soo sheegaan shakhsiyaadka ka soo baxa kulanka. Si aad u sameyso maamulaha mawduuca internetka ee qarsoodiga wuxuu u ekaan doonaa samaynta soo saaraha wargeyska kaasoo ku saabsan khilaafka u dhexeeya khatarta loogu talagalay naqdiga. "
Wuxuu intaa sii raaciyay in uu tilmaamayo in maamulaha booqashada internetka ay ku dhiiri galin karto in uu ku tago meel aan ku dhajin walxaha khatarta ah. Sahai Endlaw ayaa u sheegay in "Marka marxaladda internetka la sameeyo, qofka wax soo saaruhu uusan filaynin mid ka mid ah shakhsiyaadka inay ku raaxaystaan ​​naqdin, sharaxaad sharaf leh oo ay sameeyaan shakhsi kasta oo ka mid ah ururku ma dhigi karo mawduuca" .
Agaasimaha Guud ee Facebook Mark Zuckerberg oo u shaqeynaya "Jarvis"
Tis The Season, Google Doodle wuxuu ku dabaaldegaa bilaabashada Fasaxyada